शरीरका अंग-अंगमा पार्न सक्छ कोरोनाले असर | Hamro Najar
काठ्माडौँ । डाक्टर तथा सरूवारोग विशेषज्ञहरूले धेरै समयसम्म कोरोना भाइरसको असर मान्छेको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र देखिन्छ भन्ने सोचेका थिए। छ महिनाको कोरोना महामारी अनुभवबाट वैज्ञानिकहरू नयाँ निष्कर्षमा पुगेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो भाइरसको असर संक्रमित व्यक्तिको श्वासप्रश्वासमा मात्र सीमित छैन। यसले अरू विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या पनि ल्याउँछ। तीमध्ये केही समस्या त बिरामी र हाम्रो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा लामो समय रहिरहन सक्छ।
कोरोना उपचार तथा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो भाइरसले बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुनुका साथै विस्तारै शरीरका अरू अंगमा पनि आक्रमण गर्छ। कतिपय अवस्थामा शरीरका अरू अंगमा नराम्रो हानि पुर्‍याएको पाइएको छ।
भाइरस संक्रमणको असर बल्झिएपछि उपचार प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त, अपूर्ण र खर्चिलो हुने उनले बताएका छन्।
सिकागोस्थित नर्थवेस्टर्न मेडिसिनका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सादिया खान कोभिड–१९ को असरलाई ‘विशिष्ट’ मान्छन्।
‘विगतमा इन्फ्लुएन्जाले मुटुरोग भएका बिरामीलाई जटिल समस्या ल्याएको थियो,’ डा. खानले भने, ‘कोभिड–१९ ले पनि फोक्सोबाहेक शरीरका अन्य अंगहरूमा गम्भीर समस्या पारेको पाइएको छ।’